Dowladda Federaalka Ah Oo Daahfurtay Imtixaanka Shahaadiga Ah – Goobjoog News
in Shaqadoon, Shaqo Doon, Uncategorized, Wararka Dalka
Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa maanta daahfuray Imtixaanka Shahaadiga ah oo ay qaadeyso dowladda federaalka ah, Imtixaankan shahaahdiga ah ee ardeyda dhameyneysa dugsiga sare waxaa lagu daahfuray iskuulka 15 May.
Imtixankan ayaa waxaa la sheegay in ay maanta U fariisan doonaan ku dhowaad 27,600 ardey oo ku sugan Muqdisho iyo gobollada dalka.
Imtixaanka ayaa waxaa lagu qaban doonaan 120 Xarumood oo ka tirsan Afar maamul goboleed kuwaasi oo kala ah Galmudug, Hirshabelle, Koofur Galbeed iyo Jubbaland.
Wasiiro dowlaha wasaaradda Waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamud Cabdulle Jibril ayaa sheegay sanadkan tiro badan oo ardey ah u fariisan-doonaan Imtixaanka sababtana waxaa uu ku sheegay in meelo badan la xorreeyay.
Cabdulle, waxaa uu intaasi raaciyay in ardeyda B/weyn si gaar ah looga qaadi dooni Imtixaanka maadaama ay saameeyeen Fatahaadaha.